अष्ट्रेलियामा देशसँगै स्वाद चिनाउँदै एभरेष्ट मःम
के अहिले तपाईं अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा हुनुहुन्छ ? जिब्रोमा नेपालमै बसेको स्वाद र मनले चाहेजस्तो खान पाइरहनु भएको छैन कि ? अब यसबारे चिन्ता लिइरहनु पर्दैन ।
नेपाल रहँदा तपाईंको जिब्रोमा झुण्डिएको स्वाद सिड्नीमा पनि उपलब्ध हुन थालेको छ । छिटो, छरितो, सस्तो र भनेको समयमा खान पाइने मःमका पारखी र यस्तो मःमको चाहना राख्नेहरू सिड्नीमा पनि धेरै छन् । तपाईंहरूको यही चाहनालाई पूरा गर्न यतिबेला काभ्रेका सन्तोष अधिकारी र विराटनगरका प्रमोद रिमाल दुई नेपाली युवा लागिपरेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको सिड्नीलाई कर्मथलो बनाएका यी युवाले सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा ल्याएको एभरेष्ट मःमले यतिबेला सिड्नीमा रहनुभएका नेपालीजनको मन जितिरहेको छ ।
‘हामी सिड्नीको पारामाटामा दुई वर्षदेखि एभरेष्ट मःम खुवाइरहेका छौँ । हाम्रो यो मःमले के नेपाली के विदेशी सबैको मन जितिरहेको छ । विदेशीहरूलाई नेपाली स्वादप्रति आकर्षित गराउन सक्नु हाम्रो सफलता हो,’ सन्तोष र प्रमोदले भने ।
एभरेष्ट ममको यो लोकप्रियतासँगै अब फ्रेन्चआइज पनि बिक्ने भएको छ । एभरेष्टको केही शहरमा फ्रेन्चआइज बिक्दै छ भने अष्ट्रेलियाबाहिर पनि यो ब्रान्ड किन्न चासो देखाउनेको संख्या बढ्न थालेको कुरा बताइएको छ ।
अब यी दुई युवा आफ्नो ब्राण्डलाई नेपालको नामसँगै स्वाद पनि विश्वमाझ पुऱ्याउन कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । एभरेष्ट मःम अहिले सिड्नीको ३० भन्दा बढी सुपर मार्केटमा पाइन्छ भने एभरेष्टले ४४ प्रकारका मःमहरू तयार गर्ने गरेको छ ।